Zekariya 3 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Chiratidzo 4: Mupristi mukuru anochinjwa nguo dzake (1-10)
Satani anorwisa Mupristi Mukuru Joshua (1)
‘Ndichaunza mushumiri wangu anonzi Nhungirwa!’ (8)
3 Akabva andiratidza mupristi mukuru Joshua+ uyo ainge akamira pamberi pengirozi yaJehovha, uye Satani+ akanga akamira kuruoko rwerudyi rwaJoshua kuti amurwise. 2 Ngirozi yaJehovha yakabva yati kuna Satani: “Jehovha ngaakutuke, iwe Satani,+ chokwadi Jehovha uyo asarudza Jerusarema+ ngaakutuke! Murume uyu haasi danda ravhomorwa mumoto here?” 3 Zvino Joshua akanga akamira pamberi pengirozi, akapfeka nguo dzakasviba. 4 Ngirozi yakati kune vaya vakanga vakamira pamberi payo, “Mubvisei nguo dzakasviba.” Yakabva yati kwaari: “Hona, ndabvisa kukanganisa kwako* pauri, uye uchapfekedzwa nguo dzakanaka.”*+ 5 Saka ndakati: “Ngavamupfekedze ngowani* yakachena.”+ Vakabva vamupfekedza ngowani yakachena, uye vakamupfekedzawo nguo; uye ngirozi yaJehovha yakanga yakamira pedyo. 6 Ngirozi yaJehovha yakabva yati kuna Joshua: 7 “Zvanzi naJehovha wemauto, ‘Kana ukafamba munzira dzangu, uye ukaita basa rako pamberi pangu, uchava mutongi muimba yangu+ uye uchachengeta* zvivanze zvangu; uye ndichakubvumira kuuya pane ava vakamira pano.’ 8 “‘Inzwa, iwe Mupristi Mukuru Joshua, iwe neshamwari dzako dzinogara pamberi pako, nekuti varume ava vanotova chiratidzo; inzwa, ndiri kuunza mushumiri wangu+ anonzi Nhungirwa!+ 9 Tarisa uone dombo randaisa pamberi paJoshua! Maziso manomwe ari padombo racho; uye ndiri kunyora pariri ndichiita zvekutemerera,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha wemauto, ‘uye ndichabvisa mhosva yenyika iyoyo nezuva rimwe chete.’+ 10 “‘Zuva iroro,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha wemauto, ‘mumwe nemumwe wenyu achashevedza muvakidzani wake kuti auye pasi pemuzambiringa wake uye pasi pemuonde wake.’”+
^ Kana kuti “mhosva yako.”
^ Kana kuti “nguo dzepamutambo.”
^ Kana kuti “ucharinda.”